Xaalad deganaansho ah oo aan caga badan ku taagnayn oo saakay laga dareemayo Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan. - khaliilberberawi's blog
Xaalad deganaansho ah oo aan caga badan ku taagnayn oo saakay laga dareemayo Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Xaalad ka degan xaaladihii Maalmihii hore ayaa saakay waxaa laga dareemayaa Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan kadib markii 4-tii maalin ee la soo dhafay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo xoogan.
Inkastoo wali Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan uu ka jiro Jahwareer xoogan islamarkaana ay is horfadhiyaan dhinacyadii Maalmihii la soo dhaafay halkaasi ku dagaalamay ayaa saakay hadana xaaladda degmadaasi waxaa ay ka degantahay sidii ay aheeyd Maalmihii ugu dambeeyay.
Goobaha ay isku horfadhiyaan Ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca iyo kuwa Ururka Xisbul Islaam oo kala ah Buuntada Liiq liiqato oo ah buundo isku xirta Xaafadaha Galbeed iyo bariga Magaalada Baladweyne iyo Buundi weyn oo isku xirta Xaafadaha Bari ee magaaladaasi ayaa waxaa laga maqlayaa rasaas teel teel ah iyadoo dadku ay ka cabsi qabaan in dagaaladu ay halkooda ka sii socdaan.
Dagaaladii shalay galinkii hore iyo galinkii dambe ka dhacay Magaalada Baladweyne ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen ilaa 5 qof iyadoo in ka badan 10 kalana ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhamaantood ahaa dad rayid ah oo rasaasi ay guryahooda ugu tagtay.
Dagaalada ka dhacay Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan oo qoorta la sii galaya Maalintii shanaad oo xariir ah ayaa waxaa inta la ogyahay ku dhintay 25 ruux iyadoo sidoo kalana ay ku dhaawacmeen 60 kale waxaana dhaawacyada dadkaasi la dhigay isbitaalka Magaalada Baladweyne.
Waxaa magaalada ka barakacay dadkii ugu badnaa ee abad ka barakaca iyadoo la sheegayo in Xaafadaha Magaalada qaarkood lagu garaaco madaafiic dhowr ah,waxaana inta badan dadku ay u barakacayaan tuulooyinka ku dhow dhow Magaaladaasi si ay uga bad baadaan dagaalada ka jira Baladweyne.
Lama oga sida ay ku dambeyn doonto Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan iyadoo walina Magaalada ay isku horfadhiyaan dhinacyadii Maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay.
Mohamed Abdirahim Hassan (Fowz) Muqdisho-Somali
# Posted on Thursday, 14 January 2010 at 2:05 PM